Egg Collection : Finjinjana ny atody – Zaza no iriako
Alatsinainy 07 Decembra 2015 : Egg collection
Mazava hoany fa narahiko daholo reo torimarika natorony ilay mpampivelona ahy alohany hatongana tao amin’ilay clinic.
9 ora maraina :
Tonga tao clinic mialoha izahay mivady, teo amin’ny efitrano fiandrasana izahay no nandro ,tsy tafapetraka mihitsiny aho fa nintsangana nivezivezy (tsara ihany mba zahay mivady irery no tao). Tahotra no tena nameno tato amiko,tahotra maharary ,satria misy milaza fa maharary zany EC na ER zany. Tsara ihany fa teo vadiko nampahery ahy amin’ny teny mamy.
9 ora 15 minitra :
Nampandroso anay lay nurse ,nasainy nandroso amin’ny efitrano iray izy ary nasainy milaza ny anarako sy date naterahako sy adressiko aho mba hanaprofoina fa izaho marina io (na dia efa hainy tsara aza aho hiiii) . Nasainy nilanja vetivety aho ary tamin’ny alalany lanja azo avy eo nanomezany ahy silaka fanafody,ary nilaza izy fa ho jejina toy ny olona mamo aho avy eo fa aza gaga . Avy eo dia nasainy nosoloina ny akanjoko ka nomeny akanjo hopitaly sy bakiraro aho. Nampiriminy reo akanjo nanaovako rehetra fa ny silipoko kosa nasainy natao anaty plastic fa hatao fitilina any aminy laboratoire.
Avy eo nandroso lay embryologist nanazava ny hataondrizareo amin’ny ireo atody refa azo,ary rampitso talata amin’ny 8:45 izy no hiantso hampilaza ny fivoarany izy ireo (ndray tena tsy tadidiko lay anarany satria efa mamo ve zaho teo hiiii)
Nandroso lay Dokotera X nasainy namerina ny anarako indray aho,anotaniny sao alerigika fanafody sns …za aminy zany toa be resaka tsy haihaiko zany ( miasa sahady lay fanafody ngambany) . Notadiaviny ny lalandrako teo amin’ny tanako havia ary nasiany serengy (tsy henoko mihitsiny nidiran ilay serengy,efa zatra nitsindrona ngambany aho) .
9 ora 45 minitra (misy famatranadro lehibe eo rindrina)
Nampandrosoiny zareo tao ao amin’ilay efitrano hanaovana ny operation aho, nisy nurse anakiroa tao, nampafatatra ahy tenany izy ireo ,nasainy niakatra teo ambony fandriana aho, nisy fanazavana teo fa tena tsy dia tadidiko loatra,nony nitodika teo akavana aho dia nahita ilay vadiko mipetraka eo aminy seza. Ary teo akavia kosa toa machine maro (natahotra aho fa sambako zany oe hiditra lalina amin’ity resaka hopitaly ty,taloha mantsy toa vitany paracetamol sy tabavy hiiii)
Mandroso ny dokotera norakofany lamba toa miloko maintso aho ka faritra ilaina ihany no miseho.
Nasiany ilay nurse ranompanafody ilay serengy tamin’ny tanako,ary poa toa izay aho dia hotrany te hatory. Isaky misy zavatra hataon ‘ilay dokotera dia miteny izy, henoko daholo ny resaky ny olona rehetra manodidina ahy fa izaho kosa toa tsy manana hery hamaly azy ireo, tsy naheno maharary mihitsiny aho na kely aza,tena tsy maheno. Andramako sokafako ny masoko mba hijery ilay ecran izay mampiseho ny atody alaina avy amiko fa toa manjavona no hitako ary te-hanakipy masoko aza aho. Eny henoko ny olona miresaka ,henoko ny vadiko midoka ahy, aminy teny mamy (hiiii) ary henoko ilay nurse mamerina izay lazainy dokotera,toy eo 3,7,4 (inona daholo ary zany)
Ngamban teo 20 minitra teo dia henoko lay dokotera niteny oe vita! Vita,tadidiko manjavozavo ilay nurse nampidina ahy teo amin’ilay fandriana ,ary tafaran’izay dia tsisy tadidiko intsony tohiny.
11 ora mahery tany
Taitra aho,ary tamin’ny efitrano hafa zay misy ramatoa roa teo fandrina eo akaiky ( na misy rideau ary manelanelana anay 3 vavy dia haiko fa nandalo dingana mitovy izahay,ary izy ireo dia efa nifoha talohako noho resaka izay ifanaovany amin’ireo mpamivelona) .Ny vadiko kosa tsy nanalavitra ahy fa teo akaiky mitazaona ny tanako. Tena tsy nino aho hoe vita lay izy ,ary tsy maheno maharary mihitsiny ny tenako,zay haharary zay nefa nampitaitaina ahy hatraminy sabotsy.
Norosoin’ilay nurse dite mafana sy mofy mamy moa zahay, nasainy naka aina kely, lasa izy nanazava tamin’ilay ramotoa ato akilany izay tokony hatao.Afak 10 minitra tany hoany dia niverina izy ary nilaza fa 14 ny atody azo avy amiko. Noho ny ahy izay tsy haverina aminy andro faha 5 moa dia tsy nisy fanafody nomeny ahy fa asainy miverina fotsiny izahay ny 22 Decembra izao ,hijerena na mbola ao ilay “polyp” na aohona. Reo ramatoa roa teo akaiky dia tsisy olana raha ny resaka zareo ka afaka mamohy dia.
Nody izahay,mahatsiaro maivamaiva ery aho ,nisakafo atoandro teny andalana izahay,noana sy nangetahetra mafy ery aho satria toa efa ela ihany zay alina nisakafoanana farany izay. Vita ihany iny andro marina e!
Sariny tanako sy tongotrako nandritra ny EC
Mahafinaritra ahy daholo reo olona manodidina ahy nandritra ilay EC,ireo dokotera sy reo nurse dia hita fa manohana nanao amin’ny zavatra rehetra, ary manao zay azo atao mba hampilamina ahy. Ny vadiko moa dia tsy lazaina intsony,nanohana anahy hatranimy andro volohany ka hatramin’izao. Izaho koa manohana azy hatrany. Ny tohana avy amin’ny namako tsy lazaiko intsony. Misaotra “Anao” aho manohana anahy hatrany. Misaotra “Anareo ” aho
Misaotra nanao aho namaky ny andro,ialako tsiny raha dia herinandro aty aorina aho vao namoaka ilay lahatsoratra.
Samy ho tahiny Tompo.
Dingana ny 30 -06 Decembra 2015